Shacabka ku dhaqan Baydhabo oo lagu amray iyo guryahooda ku dhajiyaan Calan aan aheyn kan Soomaaliya	« AYAAMO TV
Shacabka ku dhaqan Baydhabo oo lagu amray iyo guryahooda ku dhajiyaan Calan aan aheyn kan Soomaaliya
598 Views Date February 24th, 2014 time 12:32 pm
Shacabka ku dhaqan Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa markii ugu horeesay lagu amray in guryahooda iyo goobahooda ganacsi ku dhajiyaan Calan aan aheyn kan Dalka Soomaaliya .
Dadka kunool Magaalada Baydhabo ayaa sheegay in Maamulka Dowlada ee Magaalada Baydhabo ku amreen in guryahooda iyo goobahooda ganacsi ku dhajiyaan calan Cusub oo la sheegay in uu astaan u noqon doono maamulka aan la isku raacin ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Maamulka Magaalada Baydhabo ayaa ku wargaliyay Shacabka ku dhaqan Magaalada Baydhabo hadii aysan guryahooda iyo goobahooda ganacsi ku dhajin Calanka cusub in lagu ganaaxi doono lacag dhan Hal Milyan oo Shiling Soomaali ah.
Dadweyne badan oo kunool Magaalada Baydhabo ayaana ku qasbanaaday in guryahooda iyo goobahooda ganacsi si qasab ah ugu dhajiyaan Calanka aan wali la isku raacin ,iyagoo ka cabsi qaba in lacagta ganaaxa ah laga qadao hadii ay amarkaasi diidaan.
Magaalada Baydhabo waxaa kasocda labo Shir oo isdiidan kuwaa oo lagu dhisayo Maamul la magac baxay Koonfur Glabeed Soomaaliya , labada Shir ee Baydhabo kasocda ayaana ah kuwa doonaya in maamulka uu ka koobnaado lix gobol iyo kuwa kale oo iyagana doonaya in Sadax Gobol ahaado maamulkaasi.